Nankasitraka ny Banky iraisan'i Afrika ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Nankasitraka ny Banky iraisan'i Afrika ny Birao fizahantany afrikanina
The Birao fizahantany afrikanina, fikambanana iraisam-pirenena pan-afrikanina, fikambanana iraisam-pirenena niorina tamin'ny vina hampiroborobo ny fananan-tany fizahan-tany goavambe i Afrika ho fitaovana catalytic hamoronana harena, asa ary kontinanta milamina sy mirindra ary miroborobo nefa mampiroborobo an'i Afrika ho toerana itiavan'izao tontolo izao safidy, dia nanambara ny fanomezana. an'ny andrimpanjakana lehibe indrindra eto Afrika, ny United Bank of Africa Plc. (UBA)
Rehefa miady amin'ny areti-mandringana manerantany ny firenena eran-tany, izay namoizana ain'olona an'arivony maro ary nandrahona ny fiveloman'ny ankohonana an-tapitrisany maro, nanidy ny tontolo ara-toekarena manerantany, dia nanambara ny fidirana an-tsehatra ny Banky Iraisampirenena UBA, tamin'ny 26 martsa 2020 vola mitentina $ 14,000,000 (Dolara efatra ambin'ny folo tapitrisa dolara) natolotra ho an'i Nizeria sy firenena 19 hafa manerana an'i Afrika. Ny virus coronavirus dia ao amin'ny 48 amin'ny firenena 54 atsy Afrika ankehitriny.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina noho izany dia mandray sy mankasitraka ity hetsika ity satria tsy misy fotoana hafa hanohanana ny ezaka fanarenana ataon'ny firenena any Afrika noho ny ankehitriny.
Ny biraon'ny fizahantany afrikana koa dia manohana fanampiana bebe kokoa indrindra ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany, ny orinasa ary ny SME amin'ny sehatra izay nahitana fahasarotana indrindra.
Vao haingana ny fikambanana dia nanangana ny COVID 19 Tour Recovery Task Force notarihin'ny sekretera jeneraly teo aloha an'ny United Nations World Tourism Organization, Dr. Taleb Rifai. Delegasiona matanjaka toa ny filohan'ny ATB sy ny minisitry ny fizahan-tany teo aloha Seychelles, Andriamatoa Alain St. Ange, sekretera (kabinetran'ny fizahantany Kenya), Hon. Najib Balala, minisitry ny fizahan-tany teo aloha Egypt, Andriamatoa Hisham Zazzou dia nanomboka ny asany tamin'ny fanatanterahana ny lahasa voalohany amin'ny fitarihana amin'ny fomba vaovao ny ezaka eo anoloana, ny fisoloana vava, ny fiaraha-miasa amin'ny famerenana ny sehatry ny fizahantany afrikanina.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Birao Afrikana fizahan-tany sy ny fomba hanatevin-daharana: www.africantourismboard.com
2 herinandro nijanonana tao amin'ny hotely kintana 5 naloan'ny Governemanta Aostralianina
Ny loza ateraky ny fahafatesan'ny Coronavirus? COVID-19 Fikarohana milaza ny marina